Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa Sabtida maanta ah booqashadii ugu horreysay ku tagay Sudan tan iyo markii xukunka laga tuuray Madaxweynihii hore Omar al-Bashir, iyadoo dalalkan deriska ah ay riixayaan in ay xalliyaan ismari-waaga diblomaasiyadeed ee ka taagan biyo xireenka weyn ee ay Ethiopia dhiseyso.
Sisi waxaa sidoo kale inta uu joogo Khartoum kala hadlaya madaxda Sudan amniga Badda Cas iyo xaaladaha ka soo kordhay xuduudaha Sudan, sida lagu yiri bayaan ay soo saartay madaxtooyada Masar.
Sudan ayaa wajahaysa caqabado xagga amniga ah oo ay ka mid yihiin kororka rabshadaha ka socda galbeedka gobolka Darfur iyo iska hor imaadyo hubeysan oo dhowaan ka dhacay deegaan lagu muransan yahay oo ku yaal xadka ay la wadaagto Ethiopia.
Labada dal ee Masar iyo Sudan ayaa ka walaacsan biya- xireenka Ethiopia dhisayso kaasi oo ay Addis Ababa sheegtay in uu muhiim u yahay kobcinta dhaqaaleheeda.
Ethiopia, oo sheegtay in ay xaq u leedahay in ay isticmaasho biyaha wabiga Niil oo muddo dheer ay Masar ka faa’iideysanaysay, ayaa xagaagii hore bilowday in ay buuxiso kaydka biyo-xidheenka ka dib markii Masar iyo Sudan ay ku guuldareysteen in ay heshiis sharci ah oo biya-xireenka quseeya ay la gaaraan Ethiopia.
Khartoum ayaa ka cabsi qabta in biyo-xireenka oo ku yaal wabiga Niilka buluuga ah ee u dhow xadka Sudan, ay kordhin karto halista fatahaadaha islamarkaana ay saameyn ku yeelan karto howlaha ammaan ee biyo xireenadeeda, halka Masar ay ka cabsi qabto in sahaydeeda biyaha ee ay ka hesho webiga Niil uu hoos u dhaco.
Sudan ayaa dhowaan soo jeedisay in Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo Midowga Africa ay si firfircoon u dhexdhexaadiyaan dhameynta muranka, halkii ay si fudud u daawan lahaayeen wadahadallada, soo jeedintan oo ay Masar-na taageertay.
Ethiopia ayaa toddobaadkan muujisay sida ay uga soo horjeeddo in dhexdhexaadiyeyaal kale lagu daro geeddi-socodka hadda socda ee Midowga Africa uu hoggaaminayo.
Wadahadal khadka taleefanka oo uu Jimcihii la yeeshay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, ayuu Wasiirka Arimaha Dibadda Masar Sameh Shoukry wuxuu “carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la bilaabo geedi socod dhab ah oo gorgortan wax ku ool ah” kuna saabsan biyo xireenka ka hor inta aan la gaarin wareega labaad ee buuxinta kaydka ee la filayo xagaaga.